Home » Creative Writing » ကျနော်… customer
Posted by alinsett on Feb 21, 2015 in Creative Writing, Critic, History, My Dear Diary | 37 comments
customer ပါဆို... အလင်းဆက် ပြောချင်တဲ့စကား
သူများအလုပ်လေ ရောင်းရရမရရ သူပိုက်ပိုက်ဝင်တာကျလို့
သူများအလုပ်ကို ကိုယ့် ကိုယ်ပိုင်အလုပ်လို သဘောမထားနိုင်ရင်
ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်သိပြီး လုပ်တာ သခင်စိတ်
မြန်မာပြည်က ဆားဗစ် တွေ ခေတ်နောက်ပြန် ဆွဲ ဆွဲ လာတာ ကြာပါပေါ့။
ကျွန်တော်ကတော့ ပစ္စည်း အ၀ယ်နည်းသဗျ… ဆိုင်တွေ နဲ့ လည်း အဆက်အဆံ ပါးတယ်….
ကတဲမိန်… သားသမီးသုံးယောက်အတွက် အသုံးအဆောင်တွေ ဝယ်ရင်…ဘယ်လိုဝယ်ဒုန်းဗျ..
အခွေရောင်းတာဆိုလို့ဝင်ပြောဦးမယ်။ လှည်းတန်းတစ်ဝိုက် ရောင်းနေတဲ့သူတွေ
ခါတိုင်း ဒီ လို အချိန်တွေ နိ မလာတတ်ပါဘူးးး
အခုနောက်ပိုင်းအရောင်းစာရေးမတွေရဲ့အရည်အသွေးတွေကျလာတယ်။ စီးတီးမတ်မှာတောင် အရည်အသွေးမထိန်းနိုင်တော့ဘူး။ တခုခုဆိုရှာမပေးချင်တာနဲ့။ မသိတဲ့ပစ္စည်းဆို မရှာပေးပဲ ဒါမျိုးမတင်ဘူးတို့ပြောလွှတ်တာ
ဟုတ်တယ်။ စီးတီးမတ်လည်း အရည်အသွေး ကျလာတယ်။
ကနေ့ မနက်ပဲ gym တစ်ခု ရဲ့ reception counter ကို ရောက်လို့ မျက်လုံး စပ်စု ကြည့်လိုက်တာ။
မယုံသင်္ကာအကြည့်နဲ့ ဝယ်နိုင်ပါ့မလားဆိုတဲ့အထာတွေ ပေးနေကြတာလည်း ကြုံရပါတယ်။
အို…အဲလိုဆိုင်မျိုးက ပြန်ထွက်သွားရင် ရိုးရိုးမထွက်သွားနဲ့..ဖင်ခါပြီးသာ ထွက်သွားလိုက်…
တိန် တိန် (နှစ်ခါတိန်)
ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေရဲ့ Management Skill လဲ လိုအပ်တယ်….။ Customer တွေနဲ့ တိုက်ရိုက်ဆက်ဆံရတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေကို Customer Service နဲ့ Communicationပိုင်း သင်ပေးသင့်တယ်…။ ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ် အသိမိတ်ဆွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်…ဆိုင်အခြေအနေနဲ့ အရောင်းဝန်ထမ်းရဲ့ ဆက်ဆံရေးကို အမြဲ သတိထား စောင့်ကြည့်သင့်တယ်…။ ၀န်ထမ်းတွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်အခြေအနေကိုကအစ သိထားသင့်တယ်…။
( ဟိုကောင်မလေးဆိုင် မဟုတ်ပါစေနဲ့ )
( လှည်းတန်း ဘူတာရုံလမ်း(အင်းစိန်လမ်းမပေါ်)က
ဒါဆို နင်ပြောလိုတဲ့သဘောက အဲ့ဆိုင်က ၀န်ထမ်းကောင်မလေးတွေကတော့ ပစ္စည်းလဲမမှန်ဘူး၊ ဈေးလဲမမှန်ဘူး၊ အာမခံချက်လဲ မရှိဘူးဆိုတဲ့ သဘောလားဟေ….
သူက မရှိဘူးဆိုတာနဲ့ ကိုယ်လည်း.. ဟုတ်ပြီ..ဆိုပြီး..လှည့်ထွက်လာခဲ့တာပဲ…
ဟို Mobile Mother က တော့..သေချာ စမ်းသပ်ခဲ့တယ်။
(မှတ်ချက် ။ ရိတိတိ ဖြစ်သည်။ ၇ ကျပ် တိတိ ဟု မဆိုလိုပါ။ ၇ (ခုနှစ် နံပါတ်တွင် အဆံမပါပါ။ ရကောက်တွင် အဆံပါပါသည်။ ကျနော်က အဆံပါသော ရကောက်ဖြင့် ရိတိတိ လုပ်ခြင်းကိုသာ ဆိုလိုသည်။ ၇ ကျပ်တိတ်ိ သွားလုပ်လျှင်… အဲ့ကောင်မလေးက ၈ ကျပ်တိတိ ပြန်လုပ်ထည့်လိုက်မှာကိုတော့ စိုးပါသည်။)
၀န်ထမ်းအများစုက အဲသလိုပဲ ဖြစ်နေကြတာတွေ့နေရတယ်။
သခင်မျိုးဆိုပြီး သခင်စိတ်မမွေးနိုင်ကြဘူးလို့… တံဆိပ်ကပ် ခံရတာ..
သခင်စစ်ရင်.. ရှက်လို့ လဲသေပစ်ဖို့ကောင်း…
အဲ့ဒီ အရောင်းဝန်ထမ်းလေးတွေလည်း အလှကုန်ရောင်း ၀န်ထမ်းတွေလို အရောင်းပေါ်မှာ ကော်မရှင်ရရင်ဖြင့် ဆက်ဆက်ကိုလည်း အတင်းဆွဲ ရောင်းကြမှာပါကွယ်…
.ငွေတစ်ခုတည်းကြောင့် လုပ်နေရင်..အဲဒီအလုပ်ဟာ… သိပ်အကျိုးမရှိနိုင်ဘူးလို့..ကျနော်ယူဆတယ်။
ကျနော်တော့..အဲဒီလို ဝန်ဆောင်မှု ညံ့ဖျင်းတဲ့ ဆိုင်မျိုးဆို နောက်တစ်ခေါက် လုံးဝ မသွား…တော့ဘူးဆို..
-အလုပ်ကို အလုပ်နဲ့တူအောင် လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးမျိုး
အလုပ်ကို ဝတ်ကျေတန်းကျေ လုပ်တတ်တဲ့သူမျိုး